Hello Nepal News » ग्रीजम्यानको कमजोर प्रदर्शनले भाल्भर्डे चिन्तित : के भन्छन् उनी ?
ग्रीजम्यानको कमजोर प्रदर्शनले भाल्भर्डे चिन्तित : के भन्छन् उनी ?
स्पेनिस बार्सिलोनाका नयाँ अनुबन्धित स्टार खेलाडी एन्टोनी ग्रीजम्यानले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । एथ्लेटिको मड्रिडका पूर्वस्टार उनले क्याम्प नोउ आइसकेपछि ६ खेल खेल्दै मात्रै १ गोल गरेका छन् ।
उनले प्रि–सिजनका ५ र ला लिगाको एक खेलिसकेका छन् । जसमा उनले आफ्नो नााममा मात्रै १ गो गरेका छन् । ग्रीजम्यानको सुरुआती दिनका प्रदर्शनबाट समर्थकहरू खुसी छैनन् ।
ग्रीजम्यानले अपेक्षा गरेअनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डे पनि चिन्तित देखिएका छन् । ला लिगामा दोस्रो खेल खेल्नुअघि मिडियासँग कुरा गर्दै ग्रीजम्यानले सुरुआती खेलमा सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न नसकेको स्वीकारे ।
‘उनी एक उत्कृष्ट खेलाडी हुन्, जसले पर्याप्त गोल गर्न सक्छन् । तर, यहाँ उनी अहिले संघर्ष गरिरहेका छन् । नयाँ ठाउँ र टिममा भिज्न उनलाई कठिन परिरहेको हुनसक्छ,’ भाल्भर्डेले भने । स्टार फरवार्डले लामो समयसम्म गोल नगर्दा टिमको नतिजामा फरक पर्ने उनले बताए ।
तर, भाल्भर्डेले ग्रीजम्यान चाँडै आफ्नो लयमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उनी साँच्चै राम्रा खेलाडी हुन् । मैले पहिला पनि भने भनेको छु– विपक्षीका लागि उनी खराब समाचार हुन्,’ भाल्भर्डेले भने, ‘उनले आगामी खेलमा धेरैभन्दा धेरै गोल गर्नेमा म ढुक्क छु ।’
बार्सिलोनाले २ दिनपछि ला लिगामा आफ्नो घरमा रियल बेटिससँग खेल्दैछ । सो खेलमा बार्सिलोनाको आक्रमण लाइन कप्तान लिओनल मेस्सी र ग्रीजम्यानले सम्हाल्नेछन् । लुइस स्वारेज र उसामान डेम्बेले चोटका कारण सो खेलमा हुनेछैनन् ।
प्रकाशित मिति ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०१:५७